जुम्ल्याहा दाजुभाईले जुम्ल्याहा दिदी बहिनीसँग नै बिहे गरे । फेसबुकबाटै लभ, बिहेको अचम्मको कथा, देख्ने सबै छक्क परे (भिडियो हेर्नुस) – Sandesh Press
जुम्ल्याहा दाजुभाईले जुम्ल्याहा दिदी बहिनीसँग नै बिहे गरे । फेसबुकबाटै लभ, बिहेको अचम्मको कथा, देख्ने सबै छक्क परे (भिडियो हेर्नुस)
July 24, 2021 211
काठमाडौंका जुम्ल्याहा दजाु भाई बिकल्प र सँकल्प श्रेष्ठले सर्लाहीका जुम्ल्याहा दिदी बहिनीहरु काव्या र दिव्या श्रेष्ठसँग बिहे गरेपछि उनीहरुको यो बिवाह प्रसंगलाई अहिले सबैले रोचक ढँगले हेरिरहेका छन् । बिहे गरेको भिडियो काव्याले आफ्नो टिकटकमा हालेपछि उनीहरु भाईरल जस्तै भए तर सँकल्प भने आफुहरुलाई भाईरल नभनिदिन आग्रह गर्दछन् । कलाकारितामा रहेका सँकल्प र म्युजिक भिडियो निर्देशक बिकल्पले कसरी काव्या र दिव्याको साथ पाए त
? कथा निकै रोचक छ । वास्तवमा बिल्प र सँकल्प बिच दश मिनेटको जन्म फरक छ भने काव्या र दिव्या बिच पनि उस्तै समय फरक हो । काव्या दिदी हुन् तर उनले जुम्ल्याहा दाजु भाई तर्फको भाईसँग बिहे गरिन् । यता बिकल्प दाई हुन् तर उनले बहिनीसँग बिहे गरे । यसरी उनीहरु बिच अहिले नाता लगाउने क्रममा निकै नै रमाईलो किस्सा पनि छ ।
फेसबुकमा काव्या र सँकल्पको कुराकानी हुन थालेपछि यो दुई जोडीको कथा सुरु भयो । काव्या र सँकल्प प्रेममा परे । उनीहरु दुवैलाई जुम्ल्याहा दाजु भाई दिदी बिनी हौं भन्ने बारेमा भने कुराकानी साटासाट भएन । सय आएपछि त्यो पनि थाहा भयो । पछि दिव्याले र उनका दाईहरुले सुरुमा नचाहे पनि यो बिवाह कसरी भयो त ? बिवाहको समयमा पनि यि जोडीको रमाईलो प्रसंगहरु छन् । आउनुहोस, शिशिर भण्डारीले लिनु भएको यो जोडीसँगको रमाइलो कुराकानी हेर्नुस
Prevअसाध्यै मिठो बोल्छन् यी ४ बार जन्मिने महिला, यस्ता पुरुष हुन्छन् बेखुशी
Nextझुक्किएर पनि यस्ता खानेकुराहरु साना केटाकेटीलाई खुवाउनु हुदैन, पढेर सेयर गर्नुहाेला